Iicwecwe ze-OPS zokucoca i-OPS Eyona Windowhield Washer Fluid
Ikhaya / iimveliso / Amacwecwe okuCoca
I-Windshield ye-Best Washer Fluid
Itheyibhile yeWindows yeThagethi edibeneyo ye-wiper fluid, inokuguqulwa ibe lilitha lonke lomoya eline-washer fluid (engasetyenziswanga ngezantsi kwe32 ℉), inobuchule bokucoca obunamandla.
Ithebhulethi enye emanzini i-4L iya kulingana no-4L washer fluid. Ukusetyenziswa kwee-enzymes zebhayoloji ukubola amabala ukuze kufezekiswe umphumo ococekileyo, onobuhlobo ngakumbi kokungqongileyo, engenabungozi,
akukho bhisikizi yamachiza. Ithebhulethi yokucoca i-efferescent liqabane lakho elifanelekileyo lokucoca!
♣ Iphosa ngokukhawuleza, ngokulula ukususa ukungcola kwigalazi.
♣ Ithebhulethi ye-1 + yamanzi e-4L = I-4L i-Windhield ye-washer fluid
♣ Usebenze ngakumbi kunokuba igosa lokucoca lendabuko.
Luhlaza, ubukhulu obuncinci, iindleko ezifanelekileyo kwaye kulula ukuthwala.
♣ Ikhefu yebisi yepayipi ye-bt, ibhokisi lemibala, ifilimu ye-alum, njl.
Kutheni le nto kubalulekile ukuba ukhethe amanzi anokuthenjwa wiper fluid?
Ukusetyenziswa kwexesha elide kwimimandla engaphandle, isiqhwithi somoya semoto sivele siphawule kwaye sininzi.
Ngokwezibalo zamagunya aseburhulumenteni, ngengozi yokuxabana, I-70% yazo ibangelwa umbono obuthathaka we-windscreen!
Kulula ukuguga umphephelo womoya wesikrini ngenxa yokuvezwa kwelanga kunye nemvula imihla ngemihla ukuba umphezulu awukhuseli okanye utyilwe,
Kulula ukunciphisa ubomi benkonzo yomnatha wokubambelela kunye ne-windscreen kuya kuba nzima ukuhlambuluka!
Enyanisweni, yenza i-windshield yakho isherid fluid izinto ezilula!
Ukuqhathaniswa ngemvula ye-asidi • Ukonakaliswa bubushushu obuphezulu • Ukuzahlula wedwa kunye nesanti yomoya oxhaphakileyo
Ezi meko zisoloko zenza ingozi enkulu kwi-windscreen wiper.
Ukhetho olubi lwe-windshield umsizi womkhuhlane lunokubangela ukuba ungcola okanye umsila uphuphe kwi-windscreen
ezingenakuhlanjululwa ngokupheleleyo, okubangelwa kumbono ophazamisekileyo.
Ngaba unokwenza okungahambi kakuhle?
Endaweni yokuhlamba imoto yonke i-windshield isherher fluid, sebenzisa i-powder powder, i powder powder, njl.
Okanye uhlamba ngokuthe ngqo imoto ngamanzi acocekileyo?
Yiyiphi ingozi ezisa yona?
Vala umbhobho wokutshiza, Khangela i-hose ye-raber, Harden windscreen wiper, uhlasele umbane.
I-OPS i-Ops Effervescent Cleaning Tablets, yenza i-windshield ye-windshield ye-heather.
Inqanaba lesixhenxe eliphambili kunye neempawu zecwecwe elihlangeneyo lomoya ococekileyo.
Ngokukhawuleza nangokufanelekileyo ekususeni ifilimu yeoli:
♦ Khawuleza ucoce ifilimu yeoli yesikrini somoya ngaphandle kwendawo yamanzi, kwaye iyakwandisa ubomi bomphemeli womoya womoya.
Ukukhusela umphunga womoya womoya:
♦ Ukusetyenziswa kwexesha elide le mveliso kunokunciphisa i-windscreen wiper, ngoko ke unxibelelwano olungcono i-windscreen kunye nokubonelela ubomi obungaphezulu.
Khu seleko kunye no
♦ Akukho mijelo okanye ukuqhuma kwi-windshield, ngaphandle kokubola.
Tablet I-1PC ye-washer ithebhulethi = IXWUMXL yewiper fluid, gcina indawo emotweni.
Imfuneko yokudlula imvula:
♦ Ifilimu yeoli ayinakususwa, kutheni ungayifaki le mveliso ukuxubha iingxaki zizisa ngeoli ifilimu
Ukudluliselwa kokukhanya okuphezulu, umbono ocacileyo:
♦ I-windscreen ihlambulukile kwaye ingabonakali, ibalahle ngakumbi, vumela uqhube ngokukhuselekileyo.
Ukusetyenziswa kwamandla amaninzi kunye kunye kunye:
♦ Naluphi na umthengi oyisebenzisayo nangaliphi na ixesha, i-windshield isherder fluid ebusika nayo inefuthe elihle kakhulu!
Kodwa iya kongeza isiselo esinxilisayo kwisitya somoya eshushu
Ungasebenzisa njani iipilisi zamashishini ezihlambelayo?
1. Vula isiqhekeza se-kettle yemoto uze uzalise ngamanzi acocekileyo
2. Thatha i-tablet ye-effervescent kwaye uyibeke kwi-kettle
3. Vula izixhobo zokucoca ngeemoto kwimoto kwaye ukucoca kuphelile.
Uyabona, i-windshield yomshishini wokuhlambela umbane Kulula okanye kunzima ukusebenza? Impendulo ngumsebenzi olula!
Ngaba ujonge umthengisi weetafile zomoya ezinokuthenjwa? Qhagamshelana nathi apha ngolwazi olungaphezulu!
Amacwecwe okuCoca ama-Effervescent
Amacwecwe okuCoca ama-Effervescent, I-Best Windshield isher
Umkhiqizo ocacileyo. 1PC okanye iipcs ezininzi
Kubonakala Ithebhulethi egxininisiweyo
Ixesha lokuqinisekisa 5
Umhla wokuzisa Kwiiveki ezimbini.
Ulwazi oluthe kratya, Qhakamshelana nathi
Nceda uqinisekise ukuba ungumntu ngokukhetha YeNdebe.